CAD, GIS, ama labadaba? - Geofumadas
Janaayo, 2010 ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, cadastre, Geospatial - GIS, GIS kala cayncayn ah, Microstation-Bentley
... iibinta kartida maxaa samaynaya Nidaamka bilaashka ah waa mid aad u adag marka loo eego sarkaal si uu u galo dambi (burcad-badeednimada) ee maxay tahay software qaali ah.
Dhawaan Bentley wuxuu bilaabay olole kor loogu qaadayo Khariidadda Bentley, iyadoo loo adeegsanayo dood ahaan inaan loo baahnayn in si gooni ah loo fikiro haddii labadaba lagu maareyn karo hal aalad. Tan, faallooyin dhowr ah oo aan aad ugu dhowaanay yareynta farqiga iyo joojinta isticmaalka ereyada CAD / GIS si gooni gooni ah.
Waxaa jira aragtiyo kala duwan, qaar ka mid ah dhaqaalaha, sababo dad kale kale oo qaas ahaan for caasinimada, laakiin dhab ahaan labada horumarinta farsamada, weli la dhibtoonayo dhaawac la mid ah.
1. Kiiska la taaban karo. Waxay dhacdaa in la hirgeliyo cadastare (si aad u isticmaasho tusaale), Dhismaha vektorka ee khadadka la kala bixiyay, la gooyay, la rogay, la jiiday, sawirada la raray, iwm. way sii wadaan in lagu sameeyo AutoCAD ama Microstation. Haddii aan weydiino farsamayaqaannada sababta ay u doorteen waxay oran doonaan:
ArcGIS ma ahan mid wax ku ool ah
gvSIG wuxuu leeyahay qalab laakiinse wuxuu ku shaqeeyaa si aad u gaabis ah (on Windows)
Manifold waa mid aan la aqoon oo aan haysan qalab ku filan
Qaabdhismeedka xarafka ayaa ka sahlan habka qaabaynta gorgortanka
Taageerada IntelliCAD ma ahan isku mid
Kadibna waa inaan sameynaa dhamaan dhismaha spaghetti, heerarka kala duwan, midabada, dhumucda, ka dibna u gudbi ArcGIS halkaasna ka dhisaya geesoolayaasha. Markaan sidan yeelno waan helnaa khaladaadka topoloji (oo aan aqoonsan CAD), Waxaan sameynaa wax ka beddelid waxaana u soo laabannaa isbeddellada ku dhaca vektorka, iyadoo leh wareegga howlaha waaweyn ku dhammaada hal maalin. Laakiin habka joogtada ah ee maalinlaha ah ee cusbooneysiinta joogtada ah, beddelka CAD iyo GIS waa qasacad aakhirka isu beddelaya xog aan is-waafaqsanayn.
Markaas, haddii aan rabno in aan wax dheeraad ah samayno, waxaan ku dhignaa xog ururin ah (Waxaan ku adkeysanayaa, tusaale ahaan), iskuduwaha 'CAD', oo aan ku aragno seddex meelood jajab tobanle laakiin leh saxnaan in kabadan 10 goobood jajab tobanle, ayaa hada leh seddex kaliya, taas oo ku qasbeysa in vector-ka uusan si sax ah usii mid noqon, ilaa inta uusan saameyn ku yeelan xawaaraha hababka ku jira keydka macluumaadka. Halkan cusbooneysiinta oo aan lahayn shuruudaha cilmiga dabiiciga ayaa aad u adag.
Iyo sida dhaqaalaha, degmo yar waa in maalgeli software si ay u dhisto qulqulo sax ah iyo mid kale samee khariidado fiican. Haddii degmadu adagtahay amawuxuu aaminsan yahay) uma baahna barnaamijka injineernimada si uu u isticmaalo ugu yaraan hal AutoCAD Lite iyo hal ArcGIS oo lagu daray laba kordhin; Si kastaba ha ahaatee waa mid raqiis ah, waxay ka badan yihiin $ 4,000 (iyada oo aan tababar lahayn). Kuwa la soo shaqeeyay dawladaha hoose waxay ogaan doonaan inta ay le'eg tahay qiimaha lagu iibiyo khasnajiga ka amar qaata wax ka badan duqa magaalada.
Waan ogahay, waxaa jira degmooyin aan laheyn caqabadan, laakiin guud ahaan ka mid ah astaamaha Hispanic ... waxay ku noolyihiin xaqiiqda sababaha doonaya inay sameeyaan GIS iyo CAD oo aan sigaar cabbin.
2. GIS waa inuu lahaadaa awoodaha CAD
Waxaan fahansanahay in marka ay jiraan ArcView 3x aan suurto gal ahayd in ay fuliso qalab topologies maamulka dhismaha dulinka, laakiin markan ma fahmin sababta aan u leeyihiin qalab in GIS kaliya sameeyo wixii CAD ah (wax 30)
Qalabka 12 si loo abuuro (xariiqo, xarig, wareegyo, polylines, dhibcaha ...)
Qalabka 12 si loo saxo (is barbardhig, nuqul, guurid, jihaysasho, kordhin ...)
Xakamaynta farsamada gacanta ah (ka xumahay inaan ku adkeynayo iyo sidoo kale CAD)
Waa hubaal inay mar horeba leeyihiin waxyaalahan, laakiin waxaan ka cabanaynaa nidaamka. Waa inay la mid noqdaan sida loo sameeyo barnaamijyo caan ah, iyadoo si fudud loo maarayn karo jihooyinka, masaafada, iskuduwaha, kordhinta, jiidista, jarista ... waxba astral, sida AutoCAD ama Microstation sameeyaan. Marka la eego tan, tan ugu fiican ee aan aragnay waxay ahayd dadaalka gvSIG, oo halkii laga soo celin lahaa habka loo sameeyo vectors, waxay la qabsatay habka u yeelo AutoCAD, iyada oo malaayiin qof oo isticmaala adduunka oo sidaas samaynaya (ogsoonow in AutoCAD ay leedahay habraacyo qarsoodi ah). Waxaa jira shaqo lagu bisleeyo xawaaraha shaqada marka la rarayo sawirro culus ama faylal waaweyn; Waan hubaa inay sifiican ugu shaqeyneyso Linux, laakiin kuma xirna Windows, iyo a culeys adag si loogu qanco aduunku in aysan furaneynin.
3. Waxaa jira CAD oo horey u sameeya GIS
Marka laga hadlayo Khariidadda Bentley iyo Khariidadda AutoCAD, boosku wuxuu ahaa in la abuuro awoodaha GIS ee aaladaha loo adeegsaday injineernimada. Horumarku wuxuu ahaa mid muhiim ah, shaki kuma jiro taas, laakiin ilaa maanta bandhigyo badan iyo daabacaad shaqeyn (khariidado rinji ah) way daciifsan yihiin waxa GIS sifiican uqabto (ama kafiican). Waxaan sidoo kale aaminsanahay in wax ku oolnimada hirgelinta shaqooyinka fudud ay weli ... timo jiid; haddii kale, aan aragno inta isticmaale AutoCAD (malaayiin) iyo imisa (yaa jeclaan lahaa) Khariidadda AutoCAD (ama Civil 3D); maahan sababo qiimo awgood, maadaama isbarbardhiggu isku mid noqon karo haddii aan ku sameyno isticmaaleyaasha isticmaala shatiyada la afduubay. Waxay ula dhaqantaa si isku mid ah Microstation iyo Khariidadda Bentley, iyada oo aan la helin daabacaadda iyo dhinacyada isdhexgalka (fadlan).
4. CAD iyo GIS waa laba mowduuc oo kala duwan.
Waxaa jira meel (dhulka) oo sheegaya in labada mawduuc ay yihiin laba meelood oo gaar ah iyo inaysan jiri doonin awood ay ku sameeynayso labada qalab isku mid ah; Qayb ka mid ah muuqaalkani waxay dhaxalsiisay aragtideena dhawr sano ka hor:
... CAD waa inuu yahay samaynta saxda saxda ah iyo GIS khariidado qurux badan.
Laakiin mawqifkan gaarka ah, sida mabaadi'du ay qancisay oo ay ku habboon tahay software aan bilaash ahayn, ayaa lumay jahwareer, dadaallo sida OGC ee dhinaca GIS, fulinta fikradda topology, isticmaalka xml ee ka soo baxa fikradda BIM ee dhinaca CAD-ka, iyo kuwo kale, kuwaas oo sameeyey CAD aan loo arkeynin guddi-dejin laakiin qayb ka mid ah shaqada khibradaha dhabta ah (Architecture, Civil Engineering, Topography, iwm).
Isbeddelku wuxuu sheegayaa in takhasuska uusan ku jiri doonin barnaamijka (CAD / GIS) laakiin aagga arjiga. Tusaale ahaan, qaabeynta waddooyinku waa inay ahaadaan kuwa gaarka u ah softiweerka taas sameeya, iyadoo la saxayo CAD iyo awoodaha loogu adeego barnaamijyada u adeegsan doona dhidibka si loo sameeyo sawir-gacmeed iyadoo la raacayo xaalad GIS. Sidoo kale, qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka waa inuu ku qornaadaa taariikhda iyo xogta GIS waa inay ahaataa matalaad garaaf ama jaangooyooyin dhab ah oo joomatari ahaan laga tifaftiri karo dhinaca GIS, iyadoo la weydiinayo astaamaheeda, iyadoo la ogyahay isku xirnaanta xogta kale; halka dhinaca GIS ay matalaadyadeeda cajiibka ah, ku xidhayaan xogta isla markaana ay awoodaan inay wax ku saxaan sida saxda ah ee ay CAD samayn lahayd.
Laakiin taas ... si daacad ah ayaannu uga fog nahay, maadaama aanay jirin horay loo sameeyay, qalab yar oo horayba u sameeya wax badan, laakiin waa inaad u guurto noocyada waaweyn ee software si loo hirgeliyo si haboon.
4. Sidaan u arko
Waxaan u maleynayaa in muddo ah, waxaan sii wadi doonnaa inaan adeegsanno laba barnaamij oo aan ku mataleyno isla hantida: tafatirka vector-keeda ee CAD, ku falanqeyno GIS, iyo wax ka beddelid labadaba. Fikradayda, waxyaabo badan oo aan qabanno waxaan ku rarannay qiiq aad u badan oo lumiyay fudaydkii isticmaalkiisa ujeeddooyin wax ku ool ah iyo suuqgeyn tikniyoolajiyadeed (dhibaato) ayaa naga dhigtay inaan ilowno sababta keentay hal-abuurka aadanaha (xallinta dhibaatooyinka).
Guddiga sawirku wuxuu lahaa sharaftiisa, maxaa yeelay qofna ma ikhtiraacin hab kale oo sawir gacmeed lagu sameeyo, masaxayaasha korontada ayaa lagu daray inta kale, laakiin nidaaminta ku-dhaqankooda kuma jirin waxyaabaha miiska saaran laakiin wixii aan halkaas ku qabannay. Sawir gacmeedku wuxuu ku sameynayay khariidado heerar nidaamsan oo miisaan iyo muhiimad leh, waxaan ka fikirnay waxa la daabacayo laakiin weligeen shaki kama gelin isticmaalkiisa ujeedooyinka aadanaha.
Waa inaynaan miyir beelin, maxaa yeelay hadda tikniyoolajiyaddu waa inay wax noo fududeeyaan oo ay kor u qaadaan adeegsigeeda. Marka, waa inay timaaddaa waqti marka maalgashigu istaago inuu ahaado qaababka, processor-rada, pixels, sumadaha iyo astaamaha, si waqti loogu sameeyo sababta loo abuuray: ISTICMAALKOODA. Natiijo ahaan, sidii horeba, waxaan nafteena ugu hurnay abuuritaanka ganacsi, xoolo iyo waxtarro dadka.
Laakiin fikradu waa dhalanteed, iyo ra'yigeyga, 5ta sano ee soo socota, inta badan mashaariicda heerka kor loo qaaday bilowgii, waan sii wadeynaa inaan wax isla sameeyno (eeg, yeynaan ku dhammeynin Google Earth). Iyo soosaareyaasha softiweerka CAD / GIS:
Dhinaca dhinaca ESRI, laga yaabee aynu aragno horumar kartida dhismaha CAD, waxaan rajeynayaa inaysan dib u baranin isticmaalka miiska sawirkii mar kale.
Dhinaca AutoDesk, ku faafi bulshada 3D si aad uga dhigto Khariidaynta inay u ekaato qayb injineernimada. Fikrad aniga ila habboon.
Kooxda Bentley, dhiirigeli PowerMap Qiime-jaban CAD-du inuu lahaado kartida GIS, iyo laga yaabo in uu fududeeyo hirgelinta hannaanka.
Dhinaca barnaamijka qiimaha jaban: Manifold, Tatuk GIS, Global Mapper, IntelliCAD, oo ku kasbanaya dhulka adoo samaynaya waxa magaca magaca software uusan samayn.
Haddii barnaamijka furan ee furan (sii waaraya) uu ka gudbo caqabaddan, hubaal waxaan dhamaanteen dib u fiirin doonaa, maahan oo kaliya dhinaca dhaqaalaha (Si aan arkay), laakiin xal u ah dhibaatooyinka caamka ah (taas oo hore u samaynaya) iyo suuq caalami ah oo dheeraad ah dagaal badan in burcad-badeednimada.
Rajo xumo, laga yaabee; dhalanteed, hubaal. Adiguna: Sideed u aragtaa?
Post Previous" Hore Ma jiri doonto ArcGIS 9.4
Post Next Euroatlas: Khariidadaha hore ee qaabka shpNext »
6 Jawaabo "CAD, GIS, mise labadaba?"
Waxa dhacaya waa in isku-duwayaashaada sahankaaga ay noqdaan UTM-ga waxay la mid yihiin waxa ka dhici kara meelaha 60 ee suurtogalka ah ee UTM adduunka, markaa waxaad u baahan tahay inaad qeexdo midka aad ku sugan tahay. Sidoo kale, Datum waa tixraaca "ellipsoid", si uu kuu siiyo aragti Dhererka waa isku mid, laakiin masaafada la saadaalin karo ee labadan isweydaarsi ee kaladuwanaanta looma eka. Taasi waa sababta nidaamka UTM-ka inta badan loogu yeero "la saadaaliyay."
Si aad uga dhex sameyso ArcGIS, waxaad si sax ah u taabtaa lakabka aad xiisaynayso joreferencing oo aad doorato "guryaha" xulashada, ka dibna guddigii u muuqda waxaad dooranaysaa "isha" tab.
Halkaas, waxaa jira batoon aad ku doorato "isha", ka dib waad galaysaa halkaasna waxaad ka raadin doontaa nidaam la saadaalinayo (UTM), ka dibna waxaad dooranaysaa aagga u dhigma iyo haddii aad ku sugan tahay waqooyiga ama koonfurta hemisphere.
Iyada oo tan feylkaagu yahay mid ku salaysan xogta iyo aagagga.
waaar alcala isagu wuxuu leeyahay:
subax wanaagsan, Waxaan u hambalyaynayaa l blog aad u fiican oo ka qabtaa shaki waxaan Tego waxaan noqday file DXF SHP file CAD ii ah waa georeferenced oo runtii in GIS ah, kuwaas oo kadis ah isticmaalka arcgis ii 9.3 wadataa muuqan laakiin sida aan la aqoonsan waan ogahay in waxaan gelin doonaa Datum macluumaadka oo ay tahay, laakiin ma aha sida aan ogahay gustari yaque've this meel walba u eegay on web, laakiin aan ka heli kartaa jawaab dhab ah lahaa aad buu u doorbida aad uga jawaabi kari waayeen aan su'aal fadlan waa UTM cordenadas la gsw84
«» »Jose maria wuxuu yiri: March 16, 2010 - 8:36 pm
sida loo gudbiyo sawirka cad si arc gis ama arc view »» »
Xaqiiqda: laga bilaabo khariidadda autocad waxaad ku dhoofin kartaa qaabab kala duwan, geesooleeyn (abuurista sarbeebyo) iyo dhibco.
si ay u xaliyaan dhibaatooyinka qalad topological in CAD waxaa jira erramients badan sida Autocad barbaro map caawimaad clenup Debug files CAD hor dhoofinta ama isticmaalka, sida la xiriira in ay muuqaalo objectsdata ama lakab. sidoo kale in ArcGIS iyo GIS kale software sida OpenJUMP jira validators topological in kiiskayga ayaan u isticmaalaa labada isagoo encuenta in arcgis waa xy muhiim xallinta (dulqaad) iyo q in ay ku xiran tahay tayada lakabka, la OpenJUMP eegi kartaa geesoolayaashu rito ama geesaha in xaglo masaafada ugu yar ee looga baahan yahay a hoose.
Laga soo bilaabo ArcGIS waxaad u dhejineysaa sida lakab, ka dibna waxaad ku dhejisaa Featureclass
Jose Maria isagu wuxuu leeyahay:
sida loo soo bandhigo sawir muujin ah si aad u aragto ama aragtida aragtida
Ivan Barria isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan arkaa inaad ka hadasho khibradda "CADISTA".
Waxyaabaha ugu horreeya ee horey loo ogaa: Labada barnaamijba waxay leeyihiin orinetaciones kala duwan. Ogaanshaha marka la isticmaalo mid ama mid kale waa waxyaabaha isticmaalaha. Ma dooneyno in aan isticmaalno guri guri (CAD) oo ku yaal GIS in aniga ilaahay ay tahay software ah ANALYSIS oo ka badan mid ka mid ah oo sameeya khariidado wanaagsan (oo loogu talagalay khariidadahan ama wargeyska iwm).
Hirgelinta fikradda sare ee culus ee dhinaca GIS ee sanadaha arcinfo waxay u muuqatay xal wanaagsan oo lagu xalliyo khaladaadka feyladdan. Laga soo bilaabo Arc / Info dabiiciga ah, Esri wuxuu leeyahay badhanka aad ka hadashid:
-waxbarashooyinka loo isticmaalo in lagu abuuro (xariijimo, xarig, wareegyo, polylines, dhibcaha ...) Haddii aanad ka hadlin waxyaabaha aad jeceshahay:
-waxbarashada si isku mid ah (isbarbardhig, nuqul, guuritaan, jimicsi, kordhin ...) Kuwa isku mid ah ayaa leh iyaga oo aanad tixraacin wax kale.
-Kontarool dhaqso ah practical. Ha u ogolaadaan khadadka masaafada 10 m inay kulmaan ».» Taasi? «In ay gooyaan meeshii ay isdhaafsadaan»… Taasi? "Taasi waxay kordhisaa n qaansada inay dhexgasho mid kale" ... Taasi? Sida ku jirta CAD markaa?
Dhanka kale, rabitaanka isdhexgalka softiweer waxay la socotaa howlaha isticmaaleyaasha, tusaale ahaan waxaan ku qeylinayaa is dhexgal ballaaran oo u dhexeeya ARCGIS Splus ama Matlab tusaale ahaan ...
Waxaan qabaa for cosntruccion mashruuca GIS ah, shaxda socodka ah ee aan halis ah: contruccion CAD dulinka ku salaysan, database alphanumerical in ARCGIS, dhismaha iyo falanqaynta image in ERDAS (on lid ku qabaa a images CAD yihiin oo kaliya taageero hoose iyo xogta aan la informción la GIS) iyo Qaabaynta in ARCGIS.
Sida ARCGIS (ka ARC / Info, UNIX ugu yaraan) gacanka double presicion ee wadataa oo ka mid ah fallaadhaha, dhibaato lahayn lumista sax. Sidaas SOLOo u baahan tahay inaad CAD xallin karo khaladaad topological iyo ururka of GIS / CAD noqon lahaa Malabka ah.
Si kastaba ha noqotee, dhammaan waxa ku saabsan barnaamijka tan iyo markii lagu jiro liveware, CADISTS waa inay bartaan inay wax ka qabtaan mashaariicdooda si caadi ah (Wabiyada ku jira hal lakab iyo jidadka kale) Waan necbahay helitaanka macluumaadka CAD ee leh geesoolayaasha aan sidaas ahayn, khadadka iyada oo aan la sii wadin cilmiga guud (oo kaliya garaaf ah), iyo qaansoleyda u taagan wabiyada ee lakabyada matalaya waddooyinka….